Maraykanka oo Turkiga ka jaraya saanad muhiim ah | Xaysimo
Home War Maraykanka oo Turkiga ka jaraya saanad muhiim ah
Maraykanka oo Turkiga ka jaraya saanad muhiim ah
Dowladda Maraykanka ayaa ugu dambeys ka dhabaysay digniin ay horey ugu jeedisay Turkiga, taas oo ahayd in haddii uu Ruushka ka iibsado habka difaaca gantaalada ay taas ciqaab kala kulmi doonto.
Maraykanka waxa uu sheegay in Turkiga si rasmi ah looga saaray dalalka ka faa’iideysanaya diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee casriga ah ee uu Maraykanka soo saaro kadib markii Turkiga uu habka difaaca gantaalada cirka kasoo iibsaday dalka Ruushka.
Maraykanka waxa ay qabaan in qalabkaas uu yahay mid basaas oo xogta ka xadi kara barnaamijka F-35.
Ruushka ayaa bilaabay in uu Turkiga ka dajiyo hubka S-400 todobaadkii hore.
Maxay yihiin gantaaladan?
S-400 waa magaca guud ee gantaalo kala duwan iyo raadaaro lagu illaaliyo hawada, balse nooc kasta oo uu Turkiga iibsanayo, waxaa meesha ku jirta xaqiiqda ah in hubkan uusan la falgali karin habka nabadgelyada NATO.
Waxaa arrintan ka mid ah in habka raadaarka ee lagu difaacayo gantaalada dhulka laga hago iyo kuwa la’iska soo liishaamo, balse dhibka jira ayaa waxa uu yahay ee ay NATO ka welwelsantahay in habkan loo sameeyay qaabab ku jaan go’an hadba masaafada cirka ee uu gantaalka ku socdo iyo waliba nooca uu yahay, taas oo meesha ka saaraysa in la qiyaasi karo.
Taas waxa ay micnaheedu tahay in haddii mid ka mid ah aad meesha ka saarto qeybaha kala duwan ee uu habkan leeyahay, in difaaca cirka oo dhan uu qalqal gali karo.
Ruushka waxa ay sameeyaan difaac cir oo wanaagsan, balse in qalabkan laga dhaqangaliyo dal NATO ka mid ah waxa loo baahanayaa tabobar cusub iyo waliba kaaliyeyaal ka socda Ruushka oo goobta jooga si ay wax u qabtaan haddii ay wax qaldaan.
Waxaa laga walwalsanyahay waxa saraakiisha Ruushka ay ogaan karaan marka ay rakibayaan qalabkan.
Tan waa waxa aad usii luraya Maraykanka, sababtoo ah Turkiga waxa uu doonayaa in uu hawlgaliyo diyaaradaha F-35 ee uu Maraykanka sameeyay, taas oo Ruushiyaanka ay ogaan karaan sirta ku saabsan samayskeeda.
Dhawr diyaaradood oo noocan ah ayaa kal horeyaba lagu wareejiyay Turkiga, waxaana jira duuliyeyaal Turki ah oo hadda ku tabobaranaya diyaaradahan Maraykanka gudihiisa.
Turkiga waxa uu sheegayaa in halka gantaalada iyo difaaradaha F-35 ay ku shaqayn doonaan ay ka soocnaan doonto meesha lagu hawlgalinayo kuwa Ruushka.
Turkiga ka sokoow, Ruushka waxa ay hadda heystaan sifooyin kale oo ay ku helaan xogta Maraykanka, tusaale diyaaradaha F-35 waxaa isticmaala Israa’iil, waxaana macluumaadka habkan casriga ah uruurin kara raadaaraada Ruushka ee Suuriya yaala.
Maraykanka waxa ugu weyn ee ay ka baqayaan ayaa ah in Ruushka uu helo xogaha muhiimka ah ee habka difaaca NATO ee cirka, meesha ay uga soo dhacayaane ay tahay Turkiga oo ay ka iibinayaan gantaalada S-400.
Maraykanka go’aankiisa waa cadyahay, ku simaha xoghayaha difaaca Maraykanka Patrick Shanahan ayaa warqad uu u qorey ragga dhiggiisa ah ee Turkiga u sheegay in haddii ay ka laaban waayaan heshiiska Ruushka, in duuliyeyaasha tabobarka ku jira ay tahay in ay Maraykanka isaga tagaan 31-da July.
Sidoo kale waxa ay gebi ahaanba joojiyeen in qalabkii habka difaaca cirka ee F-35 la geeyo Turkiga. Taas oo kaliya kuma eka, qeybo badan oo diyaaradahan ka mid ah waxaa lagu warshadeeyaa Turkiga, tusaale 937 qeybood oo diyaaradaha F-35 waxaa lagu sameeyo Turkiga qeyb ahaan, balse Maraykanka hadda waxa uu u weecday dalal kale in ay qeybaha kasoo iibsadaan.
Intaas oo kaliya kuma eka arrimaha, haddii Turkiga uu ku adkaysto go”aankiisa, waxaa su’aal la galin doonaa xubinimadeeda NATO.